Bishii July 2015, beta afraad ee macruufka 9 ayaa la sii daayay. Beta Tani waxay ahayd si uu u xaliyo cayayaanka dheeraad ah iyo in ka badan betas hore sameeyey hagaajiyo xasilloonida. Sida laga soo xigtay Apple, macruufka 9 ahayd ii deganaanshaha badan mid ka mid ah ay laba daayo ee la soo dhaafay, macruufka 7 iyo macruufka 8. muuqaalada Qaar ka mid ah in la soo macruufka 9 yihiin Siri horumar weyn, xogta gaadiidka dadweynaha ah ee Apple Maps, qoraalada horumar, iwm
macruufka 9 Isbedelada
Iyadoo version cusub beta ee macruufka 9, isbedelka cusub iyo la rajeenayo in cayayaanka soo. Eeg iyaga at!
Iyadoo version cusub beta ee macruufka 9, xasiloonida la wanaajiyo. Tusaale ahaan, cayayaanka ee News App hartay markii furitaanka fadhiya.
Sawiro la button mugga mar Waxaad qaadan kartaa.
Sida yaboohay by Eddy qorista, Home Sharing for Music soo laabtay mar kale.
Marka la beddelo nooca in Messages shaashadda redraw lahaa in aan hal line. Hadda, shaashadda si sax ah ay isbedesho.
Apple ee Podcasts app hadda taageertaa Picture-in-Picture feature markii ciyaaro video iyo multitasking on iPad.
Waxaad gab karaa Natiijooyinka Web Bing ifinaya Search goobaha
Tilmaame Hawsha u dhaqaaqay dhinaca midig marka Back button ka barnaamijyadooda kale waa la joogo.
Leyliga la cusbooneysiiyaa u iPhone, Apple Watch on widget Battery.
In app Settings ah, icon in ay ka dhigan tahay goob Ogeysiinta ayaa la casriyeeyay oo leh midabka guduudan oo cusub. Icon Battery ayaa sidoo kale lagu go'an iyo hadda ayaa soo koobay geesaha halkii geesaha square.
The feature Handoff markii hore loo soo bandhigay in WAYDAARKA app. Hadda, Switcher App ayaa u dhaqaaqay hoose ee interface app-wareegaya ah. Soo jiido ku bar Handoff cusub si uu u furo app ah.
Waxaa jira doorasho cusub ee Pay Apple ee app Settings ah. Doorashadan waxa kuu ogolaanayaa inaad demisaa muujinta ah oo kuu ogolaanaya in Apple Pay laga heli ka screen guriga leh double click ah.
Oo xataa ka badan!
macruufka 9 Dhiqlaha xun
Nasiib darro, ka sokow isbedelka cusub qabow, version beta cusub la yimaado cayayaanka qaarkood, sidoo kale. Laakiin, waxaan u leeyihiin in la gooyaa ku dhiirigelinayaan in uu debcin qaar ka mid ah off. Tani waa beta mar kale, iyo cayayaanka ay u leeyihiin in ay jiraan noqon. Halkan waxa ku jira 10 macruufka ugu xumaa 9 beta cayayaanka.
macruufka 9 yimaado la screen guriga la yaab leh hortag fadhiya bidix ee shaashadda guriga ugu weyn. Laakiin, mararka qaar marka aad mari badan shaashadda ka muuqan karaa taas oo bannaan.
Sida laga soo xigtay in dadka isticmaala dad badan, haddii aad ka tagto WiFi saaran yahay ka dibna isku day in aad bedesho xogta gacanta, ma waxaad awoodi doontaa in aad.
Chine qaarkood kaliya la previewed karaa in hab muuqaalka. Marka aad bedesho hab sawirka, aragtida marto iyo app ee si fiican u shaqaynayn doonaa.
Users Qaar badan oo ka caban on gaaban nolosha batteriga .
macruufka 9 Xaaladda mararka Bar muujinaya in ay qaadataa waqti aad u dheer inuu tago marka aad furto app ah.
Arrinta Yar Waa markii ugu. Users badan ayaa sheegey in markii ugu tusayso waqtiga hadda ka jirta goobta.
Macruufka 9 dhibaato kale ah codsiga joogto ah inay la soo wareegto si ay Lugood dukaanka.
Users kuwaas oo saxiixay ee macruufka 9 beta dadweynaha ma arkaan dadweynaha macruufka 9 update.
Isticmaalka barnaamijyadooda qaarkood waxay sababi karaan qalab u sudhaan iyo respring.
App Switcher uu leeyahay arrimaha Artur iyo shig-shigid.
Warbixinta cayayaan ah oo ku saabsan arrimo 9 Beta
Haddii aad soo gaarto cayayaanka ah, waa in aad u sheegtaa Apple. Waa kuwan sida.
Haddii aad isku aragto cayayaanka ku saabsan arrimo 9 Beta, qaado shaashadda. Si aad u qaadato jaraa'id shaashadda badhamada guriga iyo awood waqti isku mid ah.
macruufka 9 yimaado la app cusub. App waa Kaaliyaha celinta Apple ee. Waa in aad isticmaasho app haddii aad rabto in aad soo gudbiso warbixin kasta cayayaanka. Marka aad abuurtaan app aad saxiixdo in la ID Apple ah. Sida habboon, waa in aad isticmaasho ID isla Apple in uu yahay qalabka macruufka meesha cayayaanka muuqatay. Habkan, Apple awood u yeelan doonaan ilaa raac aad la.
Marka aad saxiixdo in, waxaad arki doontaa button ka koobanahay ee geeska top-xaq. Dooro qaybta in uu yahay ka ugu haboon ee aad arrinta. Hubi in faahfaahinta ugu badan ee suurtogalka ah marka buuxinta foomka.
Waxaad kor u qaadi doona in ay macruufka 9 Beta?
Dad badan ayaa shaki marka ay timaado casriyeeyo si macruufka 9 Beta . Dabcan, sababta ugu weyn ee lagu casriyeeyo si macruufka 9 yahay sababta oo ah qaabab cusub oo la yaab leh. macruufka 9 Beta ayaa aad u badan si ay u bixiyaan, xitaa haddii weli waa beta ah. Noocyada New, style, Chine ... wax walba oo cusub.
Laakiin, ka dibna, waxaad sii arkaya beta ereyga si joogto ah. Inta qof walba ogyahay in beta ka dhigan tahay buggy. Waxa uu u macruufka ah 9 aad. Tan iyo macruufka 9 weli waa shaqo ah ee horumarka, kala carar iyo cayayaanka gabi ahaanba waa wax caadi ah. Dhiirigelinayaan in uu wajiga beta taasi u furan dadweynaha ka dhigay si ay heli karto dib u eegista badan intii suurto gal, sidaas dhamaadka users macruufka ku dhamaan doono iyada oo ah wax soo saarka final la safeeyey.
Wax Great ku saabsan arrimo 9 waa in dheeraad ah shakhsi. Waxaa la iman app xiiso yaqaan "Ka hortag." Hortag dhab ahaantii waa cusub, macruufka hagaajinta 8 Barta bartamaha Search . App Tani ururiya xogta ka barnaamijyadooda kala duwan oo ay bixisaa info saxda ah waqtiga saxda ah. Ka hortag caawin doonaa macruufka isticmaala jadwalka mashquulsan sii noloshooda gacanta.
Ma waxa aynu u sheegnay Siri? Siri waxaa si weyn u soo hagaagtay marka la barbar dhigo macruufka 8. Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah faa'iidooyinka aad u heshid marka la isticmaalayo macruufka 9.
Siri ka sokow, in macruufka 9 Apple Maps waa ka xoog badan sidii hore. Apple Maps soo dheeriga ah ee dhinaca gaadiidka, basaska, tareenada iyo macluumaad kale oo gaadiidka dadweynaha. Points oo xiiso leh in la muujiyaa karo, oo aad isticmaali karto khariidaynta 3D iyo sidoo. Waxaad awoodi doontaa in aad hesho si aad u socoto si dhaqso leh macruufka 9, sababtoo ah haatan aad si cad u arki kartaa jidadka.
Tan iyo macruufka 9 Beta ayaa weli ku jirta marxaladdii hore khubaro badan casriga ah talinaynaa sugayaan wax dhabta ah. Waa maxay sababta? Waa hagaag, maxaa yeelay versions deganayn macruufka kartaan si dhab ah isku ciyaartid qalab aad si joogto ah. Halkii, waxaad sugi karo ka version la safeeyey rasmiga ah ee macruufka 9.
> Resource > iPhone > All About Dhiqlaha ee macruufka 9 Beta aad u baahan tahay inaad ogaatid